Home Wararka Haddaad ka Shakisneyd Hadda Xaqiiqso Doorashada ay Farmajo iyo Rooble Qabanayaan Waa...
Waxaan maqleynay kuraas ayaa loo boobay iyo kuwa kalaa la is dabamariyey, laakiin hadda waxaa so baxay in hawsha doorashada loo wado sidaas si ka sii xun. Waxaa dhacay waxyaabo aan runtii la fileyn oo ah in waraaqaha cod bixinta horay loogu sii buuxiyey magaca qofka la soo saarayo, kadibna qofka wax dooranayaa intuu qolka la tago uu ku soo celinayo sanduuqa loogu talagalayna uu ku ridiyo. Waa ayaandarro iyo foolxumo yaab leh oo uu dalkeenna maanta marayo.
Runtii waxaa jiray shaki badan in doorashadaan ay tahay mid dalka lagu gelin rabo dagaallo sokeeye, waayo cid cid dhici kartaa ama ka adag ma jirto waxaa lagu kala adag yahay waa shaarciga. Mugdigaas shakiga ahaa hadda waxaa la helay caddeymo muujinaya sida wax loo wado oo aan xataa farsamo caqli ah ahayn ee gef cad oo dembi ah. Waraaqaha wax lagu soo saaray shakhsigaas la rabay waxaa ku qoray magacyada hal qof, taas oo horay loo sii qoray.
Waxay dhacdooyinkaas ka soo bilowdeen Galmudug waxayna hadda saf mar ku yihiin K/Galbeed taas oo uu Laftgareen wacad ku maray inaysan soo baxayn qof aysan Villa Somaliya soo amrin ama aan isaga qaraabo si ula ahayn, qofkaasna uu isaga masuuliyadeeda qaadayo haddi ay xaqa u codeyso hadda iyo hadhowba.
Arrimahaan oo beesha caalamka lala wadaagay loona sheegay inay sidaan wax ku socdaan ayaaney waxba ka soo saarin, waana sababta ay dad badan oo Somaliyeed kalsoonida ugala noqdeen beesha caalamka oo hadda ku milantay Villada. Dad badan oo ay MOL la hadashay ayaa waxay sheegayaan inay u haystaan in beesha ay jeeb buuxsi ku jirto oo ay villada waxooda ka qaataan afkoodana xertaan. Sidoo kale Villada ayaa lagu dhiirrigeliyaa inay u jarto waraaqaha eryidda PNG kii wax sheegsheega ama muujiya ka hadalka sida wax u dhacayaan.
Ciddii ku doodeysa markaan dalka doorshao ayaa ka socotaa waa inay ku qanacdaa in doorasho aysan socon ee ay socoto magacaabis jid kale loo marayo, iyadoo meelo kala duwan looga dhawaaqayo magcaabistooda marka villada laga soo magcaabo.
La kulankii Rooble ma keeni karo wax isbadal ah waayo haddii ay dhab ka tahay uma hadleen sidii nin dalka ka maqnaa “ Cabasho ayaa soo yeereysa” caqli iyo hadal nin masuul ah oo dhaartay maaha ee waxaa is maahin iyo inkiraad in doorashada ay boob ku socoto.
Rooble intuu jiray matka waxa lawada ogyahay ay ka dhacayeen Galmudug marka uu hadda na leeyahay cabasho ayaa soo yeereysa. Marka Jawaari oo ay ahayd inaanba kurigiisa tartan la gelin, maadaama uu yahay xog ogaal ayxildhibaanada ugu baahan yihiin inay shuruuxda qaar ula noqdaa? Runtii waa caay caqliga Somalida uu ugu talagalay Rooble. Haddii ay daacad ka tahay ha smeeyo qodobadaan soo socda:
In uu kala diro guddiga ama uu eryo guddoomiyayaasha guddiga kadib markii ay hawshooda ka soo bixi waayen.
Inuu joojiyo beenta ah inay guddiyada madax bannaan yihiin oo caay kale ah iyo dhaar beenaadda uu rabbi marqaati uga dhiganayo waxa uu ogyahay , rabana sida ay u socdaan.
Inuu tirtiro dhammaan kuraastii sida sharcidarrada lagu soo saaray ama lagu boobay laga soo bilaabo kuwa Somaliland, kuwa Galmudug iyo Kuwa hadda K/Galbeed ka socda.
Ha magacaabo guddi korjoogteeya doorashada oo isugu jira Bulshada Rayidka, Aqoonyahanno, suxufiyiin, iyo Midowga Murashaxiinta oo dib u eegis ku sameeya dhammaan kuraasta soo baxday inuu loo raacay habkii saxda ahaa, kuwa socdana la socda oo ku ilaaliya inay raacayaan caddaaladda.
RW Rooble haddii uusan intaan sameyn Karin waxaa la gudboon inuu is casilo iskana tago, una sheego shacnbiga inusan masuuliyadeeda qaadi Karin doorashadaan, taariikhdiisa iyo hamigiisa siyaasadeedna uusan u baabi’in rag isaga ku shaqeysanaya sidii Dameer hadhowna dariiqa uga tagi doona haddey u naxariistaan, haddii kalana khaarijin doona maadaama uu ogyahay waxa dhacay oo dhan suuragalna ay tahay inuu maalin uu hadlo.
Halkaan ka dhageyso inaysan soo baxayn qof uusan Farmajo ogoleyn. Dadkana dhac iyo ihaano ayaa la isugu darayaa. Arrintaan waxay dhalin doontaa dagaal cad.
Previous articleIIhan Omar piles pressure on US over Somalia elections and Ethiopia conflict
Next articleCiidamada Booliiska oo si arxan darra ah u dilay WIIL & GABAR walaalo ah
Banaanbaxyo xoogan oo gilgilay Dalka Pakistan
Calaamadaha Burburka Qaranka oo Xamar ka soo Muuqda. Nala Arag.